बैंकका ग्राहकसरह सहकारीका ग्राहकलाई सहज हुने डिजिटल कार्ड ल्याएका छौँ : सुमन शर्मा [अन्तर्वार्ता] - Bizness News
बैंकका ग्राहकसरह सहकारीका ग्राहकलाई सहज हुने डिजिटल कार्ड ल्याएका छौँ : सुमन शर्मा [अन्तर्वार्ता]
केही समयअगाडि सनराइज बैंकले एक प्रकारको भिजा कार्ड प्रयोगमा ल्यायो। वाणिज्य बैंकका सदस्यहरूले प्रयोग गरे जस्तै प्रयोग गर्न सक्ने गरी विभिन्न सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले प्रयोग गर्न सक्ने विशेषता यसमा रहेको छ।
सहकारीका सदस्यहरूले यसरी कार्ड प्रयोग गरेर आर्थिक कारोबार गर्ने काम दक्षिण एशियामा नौलो अभ्यास हो। सुरक्षा र प्रविधिको हिसाबले मजबुत मानिएको यो कार्डको प्रयोगले प्रयोगकर्ताको आर्थिक कारोबार पारदर्शी हुनुको साथै नेपाल सरकारले लिएको डिजिटल नेपालको अभियानलाई सहयोग गर्नेछ।
सहकारीका सदस्यहरूले पनि नगदरहित कारोबार गर्न पाउनु ठूलो उपलब्धि रहेको मान्नुपर्छ। यसै सन्दर्भमा नेपालमा यस प्रकारको कार्ड प्रयोगमा ल्याउने सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मासँग न्यूज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानी :
सनराइज बैंकले केही दिनअघि सहकारीका सदस्यहरूले पनि एटिएम कार्ड जस्तै कार्ड प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने समाचारहरूमा आयो, यो कस्तो कार्ड हो?
सनराइज बैंकले सहकारीको लागि जुन डिजिटल कार्ड ल्याएका छौँ, त्यसलाई भिजाको ब्राण्डिङ कार्ड भन्ने गरेका छौँ। जुनको ब्राण्डिङ भनेको एउटामात्रै संस्था होइन। मल्टिपल संस्थाहरू मिलेर ब्राण्ड बनाएर गर्ने कार्ड हो। यसमा सहकारी संस्था,सनराइज बैंक र भिजा तीन वटैको लोगो भएको कार्ड अर्थात् सनराइज बैंकको कार्ड तर सहकारीका ग्राहकहरूले खाताबाटै डेविट भएर चल्ने गरी बनाएको कार्ड हो। धेरै समय यसमा काम गरेर अगाडि बढाएका हौँ।
यो कार्ड भिजाको अनुसारले दक्षिण एशियामा नै पहिलो शुरुवात हो। जसले गर्दा सहकारीका ग्राहकहरूले सनराइज बैंकको कार्ड प्रयोग गर्नेछन्। ग्राहकले सहकारीको खाताबाट पैसा निकाल्न तथा सपिङ (किनमेल)को रकम भुक्तानीमा प्रयोग गर्न सक्ने छन्। सहकारीका ग्राहकहरूले कुनै पनि इ-कमर्श (अनलाइन कारोबार) का पोर्टलमा गएर अनलाइन भुक्तानी गर्दा सनराइजका ग्राहकले पाउने सुविधा सरह सहकारीका ग्राहकले समेत पाउने किसिमको डिजिटल कार्ड हो।
यो कार्ड सहकारीका सदस्यहरूले कसरि प्रयोग गर्न सक्दछन्?
जस्तो अब सनराइज बैंकको कार्ड होल्डरले सम्पूर्ण कामहरू कार्डको लागि सम्झौता गरेका सहकारीका ग्राहकले गर्न सक्छन्। जस्तो सनराइज बैंकको एटिएमबाट पैसा निकाल्न सक्नेछन्। सनराइज बैंकका एटिएम सञ्जाल छन्। जसमा १५० भन्दा बढी एटिएम रहेका छन्। त्यसबाट र २७ वटै कमर्सियल बैंक र विकास बैंकहरूले पनि राखेका एटिएम मेसिनहरू रहेका छन्।
ती कुनै पनि संस्थाका एटिएमबाट पैसा झिक्न पाउनु हुनेछ। त्यस्तै, विभिन्न स्थानमा सपिङ (किनमेल) गर्दा पस मेसिन अर्थात् ‘पइन्ट अफ सेल मेसिन’ भनिन्छ। विभिन्न बैंकहरूले राखिएका एटिएम मेसिनहरू छन् त्यसबाट सामान किनेको रकम भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ। अनलाइनबाट पनि कुनै पनि सामान खरिद गरेमा,बस तथा हवाइ टिकट काट्नु परेमा लगायत अनलाइटबाट गर्ने सबै कामको रकम भुक्तनीको लागि यो कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि कमर्सियल बैंकले ल्याएको एटिएम कार्डको इकुभ्यालेन्ट हो। त्यस्तो खालको कार्ड सहकारीका ग्राहकले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यो कार्डसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जति पनि सुरक्षाका फिचरहरू रहेका छन् ती सबै सुरक्षाका फिचरहरू यो कोब्राण्डिङ कार्डमा पनि रहेका छन्।
अहिले सहकारी संस्थाका ग्राहकहरूले पाउने कार्डमा पनि त्यही सुरक्षा रहेको छ। जसमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै चिप बेस्टकार्ड भन्ने भनिन्छ। इएमबी कम्पाइन चिप बेस्टकार्ड त्यही कार्ड नै सहकारीका ग्राहकले पाउनु हुन्छ। जसले गर्दा धेरै सुरक्षित रहेको हुन्छ। अहिले ग्राहकले पहिलो कार्ड प्रयोग गर्दा ग्रिन पिन नम्बर पाउनु हुनेछ। ग्रिन पिन नम्बर भन्नाले पहिला पहिलो बैंकहरूले पेपरमा पिन नम्बर दिने गरिन्थो भने अब मोबाइलमा नै पिन नम्बर पाउनुहुन्छ। कार्ड कुनै पनि एटिएम मेसिनमा राखेर एक्टिभेट गर्दा खेरी ग्राहकलाई मोबाइलमा म्यासेज आउँछ।
त्यो नम्बर उहाँहरूले एटिएम मेसिनमा राखेपछि ग्राहकको पासवर्ड हुन्छ। ग्राहकले पासवड परिर्वतन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी पनि सुरक्षित रहेको हुन्छ। ग्राहकहरूले अनलाइन पोटलबाट कारोबार गर्दा ग्राहकको मोबाइल नम्बरमा म्यासेज आउँछ। हरेक पटकको कारोबारमा मोबाइलमा म्यासेज आउँछ। म्याजेस आएपछि मात्रै म्यासेजमा आएको नम्बर राखेपछि मात्रै कारोबार रकम भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्दा हरेक हिसावले यो कार्ड सुरक्षित रहेको छ। कसैको कार्ड हरायो, पिन नम्बर र मोबाइल समेत पायो भने मात्रै असुरक्षित हुनेहुन्छ। अन्यथा अरु कुनै हिसावले असुरक्षित छैन।
यो कार्डको प्रयोगले आर्थिक कारोबार र व्यवहारमा कस्तो परिवर्तन देख्न सकिन्छ?
यो कार्डको प्रयोगसँगै सबै भन्दा पहिला सहकारी तथा बैंक वित्तीय संस्थामा पारदर्शी बनाउने काम गर्दछ। डिजिटल माध्यमबाट पैसाको कारोबार गर्दा परदर्शी हुन्छ। ग्राहकलाई पनि आफ्नो खाताबाट कारोबार गर्दा के-के मा आफूले कारोबार गरे भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छन्। ग्राहकले जसलाई भुक्तानी गरेको छ उसले पनि कहाँबाट पैसा आयो भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसले गर्दा वित्तीय पारदर्शीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देश जसमा पैसाको जहिले पनि अनियमिताता हुन्छ र नोट पनि विदेशबाट मात्रै छापेर सबै सुरक्षा राखेर ल्याउन सक्नुपर्छ। नगद पैसा बजारमा बिस्तार गर्दा देशले पनि धेरै खर्च गरिरहेको हुन्छ। यसले बजारमा नगद पैसा बजारमा कमि ल्याउँछ। नोटमा कमि ल्याउने पहिलो काम कार्डले मद्दत गर्छ। करिव ८३ लाख सहकारीका सदस्यहरूले कार्ड नै प्रयोग गर्नु भयो भने कारोबारको डिजिटल माध्यमबाट रकम प्रयोग हुन्छ। त्यसले गर्दा सबै क्षेत्रमा पारदर्शिता ल्याउने देखि सुरक्षा समेत हुन्छ।
सहकारीका ग्राहकले कार्ड प्रयोग गर्दा सहकारीका ग्राहक समेत बढ्ने हुन्छन्। अहिले २७ वटा बैंकहरू रहेका छन्। २७ बैंकका एक सय देखि तीन सय शाखाहरू रहेका छन्। जसमा बैंकहरूको आउटलेट छ त्यो भन्दा सहकारीको प्रयोग बढी रहेको छ। ग्राहकहरूले पैसा झिक्नको लागि निश्चित समयमा मात्रै पैसा झिक्न पाउने हुन्छन कार्ड प्रयोग गर्दा यस्तो स्थिति पनि हुँदैन। बैंकहरू नपुगेको स्थानमा सहकारीको उपस्थिति रहेको छ। त्यस्तो ठाँउमा पनि ग्राहकहरूले पैसा राख्दा जतिबेला सुकै पैसा झिक्न सक्छन्। सहकारीलाई पनि कार्ड प्रयोगमा ल्याउनको लागि ट्रान्सफोरेन्सी व्यवस्थापन गर्नु पर्छ। डिजिटल सवफ्टवेयरमा डाटाहरू राख्नुपर्छ।
यस प्रकारको कार्ड प्रयोग गर्नेले अतिरिक्त शुल्क पनि बुझाउनु पर्छ, प्रविधिमा पनि खर्च गर्नु पर्छ?
बढी खर्च हुन्छ भन्ने कुरामा सनराइज बैंकका ग्राहकलाई एटिएमकार्ड दिँदा जति खर्च हुन्छ। सहकारीका ग्राहकलाई कार्ड दिँदा पनि त्यति नै खर्च हुन्छ। बैंकले सहकारीका ग्राहकलाई अन्य शुल्क पनि लिदैनौँ। नरमल जुन शुल्क हो त्यही नै हुन्छ। अहिले बैंकहरू यति ठूलो भइसकेकी आफैँले स्विच राख्ने क्षमता राख्छन्। स्विच मात्रै राखेर भएन । त्यसको एडमिन स्टेसन त्यसको सुरक्षाको व्यवस्थाहरू पनि गर्न सक्नुपर्‍यो। नत्र पहिला भएको स्विच नै ह्वाक भएको थियो। त्यसैले बैंकलाई पूरा ठूलो सेटअफ चाहिन्छ।
अब धेरै बैंकहरू मिलेर स्विच स्थापना गरेका छन्। लागत शेयरिङ बेसिसमा हुन्छ। अहिले केही बैंकले एक्लै गर्छौँ भनेर गर्नुभएको छ। सबै लागत आफैँले लिनुभएको छ। धेरै बैंकहरूले शाझा सुइज रहेको छ। जसमा सहकारीहरूले पनि यो सुविधा लिनको लागि नेप्ससँग जोडिएको हुन्छ। उहाँहरूले त्यसको लागि मिलेर खर्च गर्नुभएको छ। त्यति ठूलो लागत पनि लागि नसकेको अवस्था छ। जसले गर्दा ग्राहकहरूले पाउने कार्डमा अन्य लागत जोडिन्छ कि भन्ने छैन।
यसको लागि सरकारले वित्तीय पहुँच, डिजिटल बैंकिङबाट गर्ने कारोबार र सहकारी मौद्रिक नीतिमा पनि लेखिएको छ। सहकारीहरूलाई पनि वित्तीय कारोबारमा डिजिटल बनाउने कुरा लेखिएको छ। त्यही सोच तथा पहिले देखिको अवधारणा भएकाले सनराइज बैंकले यसमा प्राथमिकता दिएर केही गर्न सकिन्छ की भनेर अध्ययन गर्दा अगाडि आएको कुरा हो।
यो तत्कालै भएको कुरा होइन धेरै समयको तयारी गरेर आएको हो। अब यसको सहकारीका सदस्यहरूले कतिको प्रयोग गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले जति प्रयोग बढाउँदै जानुभयो त्यति नै डिजिटलहरू कारोबार बढ्ने विश्वास रहेको छ। यही अवधारणा अनुसार बैंक अगाडि बढेको छ। जुन दक्षिण एसियामा नै पहिलो पटक नेपालमा ल्याइएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा क्यूआर कोड मार्फत कारोबार गर्ने भने पश्चात् हाम्रो पैसा हाम्रै देशमा रहोस् भन्ने अवधारणा अनुसार सबै बैंकहरूले शुरुवात गरेका छन्।
यसमा सनराइज बैंक पनि लागि परेको छ। डिजिटल कारोबार बढाउनको लागि नेटवर्क बनाउने काम गर्दै आएको छ। सहकारीमा पनि क्यूआर काड राख्नु पर्छ भन्ने सुझाव आएको छ। यसलाई पनि बैंकले सोच बनाएको छ। डिजिटल बैंकिङ कारोबारको लागि सनराइज बैंकले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ।
सहकारीमा रहेका समस्याहरूमा उहाँले आफ्नो संस्थाको पूरै तथ्याङ्कहरू सिस्टममा राख्नु पर्‍यो। सहकारी सिस्टमबाट चलाउनु पर्‍यो। सिस्टममा चल्ने सहकारीहरूले यस्तो किसिमको काम गर्नु सक्नुहुन्छ। यो कार्ड लागू हुँदा सहकारीमा खाता भएका ग्राहकले एटिएमबाट पैसा झिक्ने बित्तिकै सहकारीको खाताबाट पैसा काटिन्छ। त्यो किसिमको सहकारी संस्था हुनुपर्‍यो।
त्यस्तो खालको सहकारी संस्थाहरू बैंकसँग जोडिएका छन्। सहकारीको एशोसिएशनको माध्यमबाट यो कामहरू गरिरहको छौँ। अहिले चार वटाबाट शुरु गरे पनि चालु आर्थिक वर्ष भित्र २४ वटामा गर्ने योजना बनाएका छौँ। तर सहकारीहरू २४ वटा भन्दा धेरै रहेका छन्। सनराइज बैंकका सबै शाखाहरूले सहकार्य गरेर बैंकले यस्तो गर्नसक्छ भनेर सहकारीहरूको योजना भए बैंकले माग पूरा गर्ने तयारी गरेका छौँ। सहकारीहरूबाट सकारात्मक कुरा आएका छन्।
तपाईंहरूले सुरु गरेको यो सेवाले नेपाल सरकारले लिएको डिजिटल नेपालको अभियानलाई कसरि सहयोग गर्छ?
बैंकले बैंकिङ साक्षरताको काम निरन्तर रुपमा अगाडि बढाएको छ। राष्ट्र बैंकले पनि गर्नु भन्ने निर्देशन गरेको छ। त्यस्तै बैंकले सिएसआरमा गर्ने खर्च सामाजिक उत्तरदायित्वको काममा केही रकम खर्च गर्नु पर्छ भनेको छ।
डिजिटल कारोबारको कुरा गर्दा स्थान र मान्छे हेरेर हुन्छ। कस्तो खालको शिक्षा चाहिन्छ भन्ने हेरेर हुन्छ। त्यस्तै खालको बैंकिङ शिक्षा दिनको लागि बैंकहरूले मिलेर डिजिटल कारोबारको विषयमा कार्यक्रमहरू गर्ने योजना बनाएको छ।
शहरमा बसेका सहकारीका सदस्यहरूलाई कार्डको विषयमा शिक्षा दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। उहाँहरू यो विषयमा धेरै जानकार हुनुहुन्छ। सहकारी भएका धेरै ठाउँहरूमा डिजिटल कारोबारको विषयमा थाहा नहुन सक्छ। उहाँहरूको लागि सुरक्षाको विषयमा जानकारी दिनुपर्छ। त्यसको लागि बैंक तयार रहेको छ। त्यहीअनुसार योजना बनाइरहेको पनि छ।
प्रकाशित : मंगलबार, पुस २७ २०७८०५:००